ကျိုက်မရောက ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ကျိုက်မရောက ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီး
Posted by weiwei on Jan 6, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 20 comments
wei's photos မော်လမြိုင်အမှတ်တရ
ဘုရားဝင်းအတွင်းက အပေါက်ဝမှာ တွေ့ခဲ့ရတယ်
ဒီပို့စ်မှာ ရေးစရာနဲနဲများတယ်။ ကျိုက်မရောက လမ်းခရီးသာယာတယ်။ ထန်းပင်တွေ တန်းစီနေတာ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ ကျိုက်မရောရောက်ရင် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီးကို ဘုရားဖူးတိုင်း သွားဖူးကြပါတယ်။ အဲဒီဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်က ထပြီးလမ်းလျှောက်တော့မလို အနေအထားနဲ့ ထုလုပ်ထားတယ်။ မျက်နှာတော်ကိုပဲဖြတ်ကြည့်ရင် ရှေ့တည့်တည့်ကိုကြည့်နေလို့ မတ်တပ်ရပ်နေသလို ထင်ရပါတယ်။ အရင်တုန်းက ခြေထောက်မှာ သံခြေချင်းခတ်ထားပေမယ့် အခုတော့ဖြုတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ ဒေသခံတစ်ယောက်ပြောပြတာကတော့ အရင်တုန်းက အဲဒီနေရာတွေက လယ်ကွင်းတွေပဲရှိတယ်။ ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာ လူတွေက အဲဒီနေရာကို စွန့်သွားရတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားမျောပါသွားမှာစိုးလို့ ခြေချင်းခတ်ထားတာပါတဲ့။ ကျန်တဲ့ရာဇ၀င်တွေ သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပါအုန်း ….
ဘုရားကြီးဘေးနားမှာ အဆောင်တစ်ခုနဲ့ နဂါး အမြုတေထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ စပ်စုချင်လို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဘဲဥပုံစံကျောက်လုံးလေးတွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနေရာက နဂါးရှိရာနေရာမို့ အမတေရှိရာ အမတေစု ဆိုသလိုမျိုး တခြားဒေသကတွေ့ရတဲ့ နဂါးအမတေတွေကိုလဲ အဲဒီမှာ တစ်ပေါင်းထဲ သိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ နဂါးအဖြစ် မပေါက်ပွားဖြစ်ပဲ ကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ နဂါးဥလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အဓိဌာန်ပြီး နွားနို့ကပ်ရင် နွားနို့ဆူပွက်တယ်တဲ့ …
ဘုရားဆင်းတုတော်တွေအများကြီးရှိပြီး အလွန်သပ္ပါယ်ပါတယ်။ မျက်နှာတော်နဲ့ ဦးခေါင်းက ယိုးဒယားဘက်က ပုံစံနဲ့ ဆင်တူတာတွေ့ရတယ်။
ဘုရားကြီးနားက အသုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင် နံမည်ကြီးတယ် (နံမည်မေ့သွားပြီ) … အသုတ်မျိုးစုံရပါတယ်။ ကျွန်မတောင် တစ်ခါမှမစားဖူးတဲ့ ငှက်ပျောဖူးသုတ် စားခဲ့သေးတယ်။
မော်လမြိုင်ရောက်ရင် တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက် ကျိုက်မရောကို သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးရင်း …..
ကျိုက်မရောဘုရားကြီးက ထထလမ်းလျှောက်တတ်လို့ ခြေကျဉ်းခတ်တယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။
သိပ်တော့ မဆီလျော်သလိုဘဲ။ဝေေ၀ရေးပြတာက ပိုသင့်မယ်ထင်တယ်။
အဲဒီနယ်ကျွမ်းတဲ့ ပုပုကို မေးကြစို့၊
ကျိုက်မရောလမ်းပုံလေးကတော့ တစ်ချိန်က ပြက္ခဒိန်တွေ writing pad တွေမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ရှုခင်းလေးပါဘဲ။
အဲဒီ ထန်းပင်တွေနား အမှတ်တရ ရူးရူးပေါက်ခဲ့ဘူးတယ် ..အရင်တုန်းက ကင်မလာ မရှိဘူးလေ.. အမှတ်ရအောင်လို့ ……
မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်တခုပဲ… ပြက္ခဒိန်တောင် အဲဒီထန်းပင်တွေပါတဲ့ ပြက္ခဒိန် တောင်ရှိသေးတယ် ထင်ပါတယ်….
ထန်းပင်လမ်းရောက်ရင် ရှူရှူး ပေါက်ပြီး မှတ်တိုင်ထူအုန်းမှ
ထန်းပင်တွေ စီတန်းနေတဲ့ ကျိုက်မရောလမ်း အကြိုက်ဆုံးဘဲ
ဘုရားဒါယိကာမ ဒေါ်ဝေဝေ အားကျေးကျေး ပါ
ရှင်စောပု ဘုရင်မကြီးရဲ့ မောင်းကို သဘောကျတယ်။
အစ်မ ဝေေ၀ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတော့ အတွင်းပတ်ပတ်လည်က ဘုရားဆင်းတုတွေကို လိုက်ရေတွက်ကြည့်ရင် တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်မတူဖူးဆို… ဟုတ်မဟုတ်မတော့မသိဝူးးးး ဟီဟိ…
ဟုတ်တယ် New User ရေ။ အဲလို ကြားဘူး တယ်။ :-)
ဝေဝေ ရေ –
~~~ ဦးခေါင်းတော်က ယိုးဒယားနဲ့ဆင်တူတာတွေ့ရတယ် ~~~~
ထိစပ်တဲ့ ရေမြေ လိုက် ပြီး ဘုရားပုံသဏ္ဌာန် တွေတူ ကြတာ များလားနော်။
ကိုယ်တိုင် တကယ် ရောက်ပြီး ဘုရား တွေ ကို ဖူး ရသလို ခံစားမိပါတယ်။
ရေတွေဘယ်လောက်အမြင့်ကြီးတတ်တတ်မမြုပ်တဲ့ ကျိုက်ခမီရေလယ်ဘုရားရောရောက်သေးလား ခင်ဗျ…..
ဦးဇိန ဘုရားရှေ့က ပန်ရံပျံ ၀တ်တော်ကြီးလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်….. အဲဒါက မော်လမြိုင်မှာပဲလေ….
မြို့ထဲက ဘုရားတွေ ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ် ..
နောက်နေ့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း တင်ပါအုန်းမယ် …
ပုံတင်ရတာ မလွယ်ဘူး … အချိန်အရမ်းကြာတယ် …
လာလည်တဲ့သူတောင် အပုံတွေတင်သွားတာ အားကျစရာ… ရာသီဥတု သာယာမျှတသော… တောင်ရိုးတန်းရှိသော… ကမ်းနားလမ်းရှိသော… လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှည်ဆုံးတံတားကြီး (သံလွင်တံတား)ရှိသော… အပျင်းနည်းနည်းကြီးသော… မော်လမြိုင်မြို့ကပုံတွေကို အခွင့်သင့်လျှင် တင်ဖို့ကြိုးစားပါဦးမည်။။။။
သဂျန်ဆိုရင် အဲ့သည်ဘုရားဝင်းကြီးထဲ သွားလည်ဘူးတယ် ( သွားဖူးတာဟုတ်ဘူး )
အဲ့သည်ရွာမှာ အဲ့သည်ဘုရားကို ကျိုက်မရောဝတ် လို့ခေါ်ကြတယ်လို့တော့ထင်တာဘဲ
ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာကြီးကတော့ သဂျီးဦးခိုင်နဲ့ ပလာဘလမ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးဘာဒယ်
အပေါ်က အမကြီး နတ်ယူးစာ ပြောသလိုပါဘဲ
ဆင်းတုတော်တွေကို လိုက်ရေတွက်ကြည့်ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြဘူး
အရိုးတွေ ကျောက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကို လိုက်ရှောက်တူးတဲ့
နိုင်ငံဂျားဂ အင်္ဂလိပ်တွေကို ပြကြည့်ရင် ဘာဥလို့ပြောမလဲဆိုတာ
ကျေးဇူးပဲ မမဝေရေ… မနောပြောတာ ဒီဘုရားကိုပြောတာ မနောထပ်မံသွားရောက်ဖူးချင်နေတာကြာပြီ မမဝေရဲ့။ ခုမှ ထပ်မံဖူးရတော့တယ်။ နောက်ဝင်းစိန်တောရ မုဒုံက လျောင်းတော်မူဘုရားလည်းတင်ပေးဦးနော် သိလား…
နဂါးဥတွေ ဒီတိုင်းထားတော့ ဘယ်အကောင်ပေါက်လိမ့်မလဲ..
နဂါးမတွေ မ၀ပ်လို့ ဥတွေ ခြောက်ကုန်တာနဲ့ ကျောက်ဖြစ်သွားတာနဲ့ တူတယ်။
နဂါးဥ ကိစ္စတော့ ခဏခဏ တော်တော် အငြင်းအခုန် ဖြစ်တယ်။
ဒီတစ်ခါ မဝေ ခရီးထွက်တာ မော်လမြိုင် ဘုရားစုံရောက်တာ အရမ်းကောင်းတာပဲ … မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံမြင်ရလို့ပါ ။ ကျိုက်မရောက ကြားသာ ကြားဖူးနေတာ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး ။ နဂါး အမြူတေလေးတွေက ဘဲဥလုံးလေးတွေလိုပဲနော် .. ဒါပေမယ့် ကျောက်သားဖြစ်နေလို့ လုံးချောလေးတွေ ကြည့်ရတာ ဘဲဥလေးတွေနဲ့အတော်တူတယ် … ။
မဝေရေ … မော်လမြိုင်ဘုရားတွေကို ပက်ကေ့ခ်ျနဲ့သွားတာ လား ။ ကိုယ့် အစီစဉ်နဲ့ သွားတာလားဟင် ။
မဝေရွာထဲ့ ပျောက်သွားတာ မော်လမြိုင်မှာ ဘုရားစုံလိုက်ဖူးနေလို့ကို
အခုလို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ မဝေရေ …
အဲဒီဘက်ကို မရောက်ဖူးသေးလို့ ဓာတ်ပုံထဲက ဖူးသွားပါတယ်နော် ………..
အန်တီဝေ ရွာထဲမှာ မန်းလို့မမှီနိုင်အာင် ထကြွသောင်းကျန်းနေပါတယ်။ ရာမညတိုင်းသားလေး တယောက်ရဲ့ ဆေးမိနေပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဆေးဖြေပေးနိုင်သူကတော့ အလွန်တရာမှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နူးညံ့လှတဲ့ မွန်သားလေး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်းမန့် ရေးတာ တော်တော် တောင် နောက်ကျနေပြီဗျာ။
အဲဒီဘက်တွေ ရောက်ကို မရောက်ဖူးဘူးဗျာ။